MAQAAL: Maxaan ka baran karnaa shirarkii jaraa’id ee uu hore Mourinho u qaban jiray marka ugu horeysa ee ay kooxaha saxaafada u soo bandhigayeen kahor inta aysan beri Manchester United soo ban bixin? – Gool FM
MAQAAL: Maxaan ka baran karnaa shirarkii jaraa’id ee uu hore Mourinho u qaban jiray marka ugu horeysa ee ay kooxaha saxaafada u soo bandhigayeen kahor inta aysan beri Manchester United soo ban bixin?
(Manchester) 05 Luulyo 2016. Ka soo bilow ‘The Special’ilaa iyo ‘The Happy One’, Shirarka Jaraa’id ee ugu horeya Jose Mourinho ma aha kuwa ay madadaalada ku yar tahay.
Ka soo bilow markii ay Chelsea saxaafa u soo bandhigtay bishii Juun 2004, ku soo noqoshadiisii Stamford Bridge sagaal sano kaddib, dhamaan shirarkaas Jaraa’id waxa ay naga dhigayaan kuwo fahmi kara waxa soo socda!
Kahor shirkiisa Jaraa’id ee ugu horeya Manchester United isaga oo tababare ah, salaasada, waxaan dib u milicsan doonaa afartii jeer ee ugu dambeysay oo saxaafada loo soo bandhigo, waxaan qiimeyn doonaa balan qaadyadiisii waxa ka mira dhalay iyo kuwii fashilmay…..
Chelsea – June 2, 2004
“Waxaan haysanaa ciyaaryahano sar sare, raali noqda hadii aan ahayn mid caasi ah, waxaan haysanaa Tababare sare. Fadlan ha’iigu yeerina caasi, waxaan ahay horyaalka Europe waxaan qabaa in aan ahay mid gaar ah (Special One).
Taas oo noqotay hadalkii ugu caansanaa ee uu ebid Tababare ka jeediyo shirkiisa Jaraa’id ee ugu horeya, Mourinho been ma sheegin, 12 bilood kaddib waxa uu Chelsea ku hogaamiyey saqafka sare ee horyaalka 5o sano kaddib, sidoo kale kii xigay sanad kaddib.
“Yoolka ugu weyn ee aan leeyahay waa in aan guuleysto kulanka ugu horeya ee horyaalka 14 Agoosto. Hadafka labaad waa in aan badiyo kan ciyaarta labaad ee horyaalka 21-ka Agoosto waana sii socon doonaa.
“Waan necbahay in aan la shaqeyo saf weyn. Waxaan rabaa in saf kooban – 21 Ciyaaryahan oo lagu daray Goolhayeyaasha wax kale ma jiraan.”
Wey badiyeen kulankii kowaad ee ay Premier League gegida Stamford Bridge kula ciyaareen Manchester United, waa xigay guushii Birmingham City, kulan qura ayey guul daro dh dhamiyeen horyaalka oo dhan iyaga oo 95 dhibcood uruursaday.
Rabitaankiisii ahaa in uu saf yar adeegsado ma dhicin, waxa uu isticmaalay 30 Ciyaryahan, tiradii afraad ee Premier League-gaas ugu badneyd, ololihii xigay waxa uu dheelsiiyey 25 Laacib, tiradii afraad ee ugu yareed.
Xilli ciyaareedkii ugu dambeyey ee uu horyaalka qaaday 2014-15 kaliya 25 Ciyaaryahan ayuu safay, sideed ayuu ka yaraa Manchester United.
Inter Milan – June 3, 2008
Afar sano kaddib maalintaas, waxa ay ahayd saxaafada Italia markeeda.
Sheekadii safka kooban ayaa marka kale la soo hadal qaaday, tani waxa ay na fahansiin doontaa intii shaandho u qaadan doono iyo in kale Ciyaaryahanadii bandhigyada hoose ee Old Trafford.
“Marka aan aqriyo saaxaafada caalamka, waxa ay u muuqataa in aan la shaqeun doono saf 60 Ciyaaryahano ah. Ma aha sax. Waan jeclahay Ciyaaryahanada. Waa koox qurux badan. Uma baahni in aan is badal badan sameyo oo kooxda ah. Waxaan qabaa in aan u bahan nahay laba ama saddex horumariya oo naga dhiga kuwa tartan adag.”
Wagaas, waxa ay ahayd Mourinho oo meesha ka saaraya taariikhdii Inter. Shaki la’aan Mourinho waxa uu wajihi doonaa su’aalo ku saleysan in uu dib u soo celinayo maalmihii barwaaqo sooranka agaa ee Old Trafford, laakiin waxa ay u muuqataa in 53 jirka uu kaliya eegi doono hore, ma aha gadaal.
“Waan in aynu ilawnaa wixii aan ku guuleysanay – taas in lagu guuleysto ayey ahayd waana taariikh. Waan in aynu leenahay yool cusub. Waxaan jeclahay in aan guuleysto mar walbana waxaan dhinac iska dhigaa wixii hore, waxaan ka fekeraa mustaqbalka.
“Hadii qof ii sheego Inter in ay horyaalka ku guuleysatay ololihii tagay, waxaan ka door bidayaa in aan dhoho Inter waxa ay ku guuleysatay 16 mar, laakiin 16-kaas hada waa taariikh. Waxaan rabaa in aan badalo falsafada kooxda, taas waa igu caqabad.”
Farqiga? Inter waxa ay ku soo guuleysatay saddex Serie A oo xiriir ah kahor inta uusan Mourinho iman. Wuu sii waday taxanahaas, isaga oo ku guuleystay laba is xiga oo lagu daray Champions League.
Real Madrid – May 31, 2010
Kaddib lix bilood oo mushaakil ahaa waqtigiisii ugu dambeyey Chelsea, dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan Mourinho oo badaln in uu yimaado Manchester. Markii uu yimid Bernabeu 2010, waxa uu saxaafada u cadeyey in uu yimaado, oo uu wax walba rabo.
“Waxaan ahay Jose Mourinho mana is badalo – waxaan la imaadaa tayadeyda iyo xumaanteyda.”
Mourinho hore waxa uu u qadeyey in guusha aysan shaqsi ahayn marka la eego Ciyaaryahanada, laakin ay tahay koox, markaa, side ayuu ula tacaali doonaa xiddigaha waa weyn ee United, kuwii hore u joogay iyo kuwa imanaya?
Isaga oo caqabad kala kulmay Laacibkii mar ahaa kan dunida ugu qaalisan, Cristiano Ronaldo in uu noqdo Ciyaaryaha koox, waxa ay ku dambeysay in Mourinho uu qiro in ninka ay dal wadaaga yihiin in uusan qaadan amarada qaar ee la siiyo ee kaartada ku saleysan. Maalmo uun kaddi wareysi uu bixiyey markii uu ka tagay Real.
Laakiin markii uu yimid, rabitaankiisa waxa uu ahaa mid cad……
“Waxaan fahansanahay in Ronaldo uu Ciyaaryahan Real Madrid u ah yahay iyo kubadda cagta aduunka. Laakiin waa in Ciyaaryahanadeyda ay fahmaan in waxa ugu muhiimsan ay tahay kooxda.
“Cristiano waxa uu jecelyahay in uu guuleysto, markaa hadii uu jecelyahay guusha ma aha mid adag in wax loo sheego, ahmiyada ugu weyn ma aha in aad ahaado tababare ama Ciyaaryahan ee waa kooxda.”
Muxuu ka oran doonaa saaxiibkiisii hore Louis Van Gaal? Ma jiri doontaa wax murudo ah? Markii uu badalay Manuel Pellegrini oo ahaa Tababarihii Real, waxa uu u xagliyey ganacsiga kubadda cagta ee hunguri goyska ah.
“Shaqo ka eryidii Pellegrini ima farxad galineyso. Marnaba kuma farxo burinta Tababare, laakiin tani waa kubadda cagta. Waxaan ahay Tababare han weyn leh oo kalsooni qaba mana ka fekero suurtagalnimada ah in la’I cayriyo.”
Chelsea, round two – June 10, 2013
“Waxaan ahay kan faraxsan”.
Wuuna ahaa, marka ugu yaraan la eego xilli ciyaareedyadaas. Dib u dhiska waxa uu qaatay sanad kahor inta uusan Premier League ku soo noqon Stamford Bridge 2015.
Markii labaad ee ay Chelsea soo bandhigeysay waxa uu door biday ka hadalka “Xasilooni” Toddobo mar “Farxad” 22 jeer “Duwanaansho” 13 mar. Laakiin waxa ay ku dambeysay isla qaabkii, Mourinho waxaa eryey Roman Abramovich bishii December 2015, 7 bilood kaddib markii uu ruxay horyaalka.
“Kalama hadashid cadawgaaga dicifnimadaada, cadawgeyda waxa ay aqrisanayaan jaraa;idada, waxa ay daawamayan telefishinada. Waan qarinaa diciifnimadeena. Ciyaaryahan walba, Tababare kasta meel ayuu diciif ka yahay. Waxaad isku daydaa in aad qariso. Markaa fursadaas siin maayo cadawga, iyada oo ay xushmad ku jirto maxaa yeelay, ciyaaraha, cadawga ma aha cadaw dhab ah. Waan garanayaa diciifnimadeyda, ma badna, laakiin waxaan isku dayaa in aan horumariyo oo aan qariyo.”
Miyuu la imanayaan Manchester United diciifnimo ka badan intiisii sideed bilood kahor markii uu ka tagay Chelsea? Waqtiga kaliyaa sheegi doona.